Xakamaynta Tayada | Hebei Da Shang Wire Mesh Products Co., Ltd.
Waxaan aaminsanahay in “maro silig wanaagsan ay hadli karto oo mesh kastaa waa inuu qiimo yeeshaa”. Waxaan u maleyneynaa in falanqaynta isku -darka kiimikooyinka, guryaha jireed iyo xakameynta dulqaadka ay yihiin lama huraan waxayna ka caawiyaan maro -siliggayaga inay muujiyaan wax -qabadkooda ugu wanaagsan ee adeegsiga macaamilka iyo waliba xaaladaha hawlgalka ee adag.
DASHANG waxay leedahay hab si adag loogu baarayo alaabta ceeriin ee ku saabsan isku -dhafka kiimikada iyo sifooyinka jirka.
Iyada oo la adeegsanayo shaashad -cabbirkan (Spectro oo ka socota Jarmalka) waxaan ku baarnaa isku -darka kiimikada ee alaabta ceeriin (waxa ku jira Cr iyo Ni walxaha) haddii ay la kulanto heerarka caalamiga ah.
Kormeerka koowaad ka dib, alaabta ceeriin ee soo socota ayaa loo diri doonaa aqoon isweydaarsiga si loogu sawiro silig. Habka sawir -qaadista waa la joojin doonaa ilaa dhexroorka siligga lagu soo jiido cabbirka la rabo ee loo xiro.
Markaan helno alaabta ceyriinka ah, waxaan tijaabin doonnaa kaarboon iyo baaruud ka kooban siligga biraha si aan u hubinno in kaarboon iyo baaruuddu ay buuxiyaan heerarka tayada iyo shuruudaha.
Marka kormeerka kor ku xusan la dhammeeyo, waxaan qaadan doonaa qayb kale oo muunad ah si aan u qaadno tijaabinta gantaalka. Muunadda waxaa la dhigi doonaa inta u dhexeysa qaybta jiidaya iyo qaybta isku haysa ee tijaabiyaha si loo sameeyo tijaabinta cillad -siinta si loo hubiyo in xoogga gilgilashada badeecaddu u qalanto.
Waxay leedahay unugga ugu yar 0.002mm. Iyada oo la cabirayo sax ah, maaliyadda cilmi -baarista iyo horumarinta ayaa la taageeri karaa, halka habka wax -soo -saarka la xakamayn karo lana hagaajin karo waqtigii loogu talagalay, ballan -qaadidda shaandhaynta mesh oo u dhiganta baahida isticmaalaha. Intaa waxaa dheer, luminta isticmaalka waa la yareyn karaa, taas oo yareynaysa qiimaha wax soo saarka.
Kahor intaan la tolin, farsamayaqaannadeennu waxay hubin doonaan haddii mashiinnada wax lagu tolo ee CNC loo dejiyay oo si sax ah loo hawlgaliyay.
Inta lagu jiro hawlgalka tijaabada, shaqaalaheena QC ayaa hubin doona haddii dabacsanaanta badeecadu ay buuxiso shuruudaha u dhigma.